Back पछाडि अभिभावकको लागि स्कूल स्वास्थ्य सल्लाहहरू चेकअप - स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कम्पनी समाचार कम्पनी चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य कम्पनी, समाचार कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार समुदाय, कल्याण मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण >> Back स्वस्थ शैक्षिक वर्षको लागि स्कूलमा पछाडि स्कूल सल्लाह
डरलाग्दो पछाडि-स्कूलको हाथापाई प्राय: स gathering्कलन आपूर्ति र समन्वय अनुसूचीहरूको अराजक हो। त्यहाँ यती धेरै किन्नुपर्दछ, अभ्यास गर्ने धेरै दिनचर्याहरू — र त्यसले तनावलाई पनि ध्यान दिँदैन किaमाहामारी २०२०-२०१२ स्कूल वर्षको लागि हो।
स्वास्थ्य सरोकार भएका बच्चाहरूको अविभावकहरूको लागि योजनाको एक अतिरिक्त स्तर छ जुन स्कूलको पछाडि जान्छ। लगभग २०% संयुक्त राज्य अमेरिकाका बच्चाहरुले क अनुसार कम्तिमा एउटा पर्चेको औषधि लिन्छन् २०१ study अध्ययन पत्रिकामा प्रकाशित बाल चिकित्सा । धेरैले एक भन्दा बढी लिन्छन्। स्कूलको दिनमा बच्चाले प्रिस्क्रिप्शन लिन्छ वा गर्दैनन्, आमाबुवाहरूले आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न सहयोगको लागि स्कूलसँग समन्वय गर्नु पर्छ।
यदि तपाइँको बच्चा यस बर्ष मा स्कूलमा फिर्ता जाँदै छ भने, यहाँ पाँच पछाडि स्कूल स्वास्थ्य सल्लाहहरु छन् कि यो सकेसम्म सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ।
सम्बन्धित: के तपाईंको बच्चा COVID-19 को बखत स्कूल फर्कनु पर्छ?
Back ब्याक-टु-स्कूल स्वास्थ्य सल्लाह
१. निश्चित गर्नुहोस् कि स्कूल तपाईंको बच्चाको औषधी र स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा सचेत छ।
यदी तपाइँको बच्चाले स्कूलको दिनको लागी औषधी लिइरहेको छैन, यसले अझै पनि यसको लागी अर्थपूर्ण बनाउँछ स्कूल नर्स वा अर्को जिम्मेवार अधिकारी तपाइँको बच्चाको सबै स्वास्थ्य आवश्यकताहरु संग परिचित हुन। यदि स्कूलमा कुनै मेडिकल आवश्यकता देखा पर्दछ भने, यो जानकारीले उनीहरूलाई तपाइँको बच्चाको हेरचाह गर्न मद्दत गर्दछ।
सामान्यतया, तपाइँ स्कूललाई ​​तपाइँको बच्चाको स्वास्थ्यको बारेमा सूचित गराउन चाहानुहुन्छ, भन्छ एरी यारेस , पीएच.डी., एक स्कूल मनोवैज्ञानिक र पोटामाक, मेरील्याण्डमा अभिभावक कोच। तपाईंको बच्चा स्कूलको एक ठूलो हिस्साको लागि स्कूल भएकोले, सामान्यतया स्वास्थ्य निगरानी गर्न र साइड इफेक्टहरू हेर्न स्कूल प्राय: प्राथमिक स्थानमा हुन्छ। आपतकालिन अवस्थामा, तपाइँ स्कूल तपाइँको बच्चाको मेडिकल ईतिहासको सबै भागहरूको बारेमा आपतकालीन सेवाहरू पूर्ण जानकारी दिन सक्षम भएको चाहनुहुन्छ।
२. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको बच्चाले उसको औषधि निर्धारित समयमा प्राप्त गरेको छ।
यदि तपाईंको सानो बच्चाले स्कूलको दिनमा प्रिस्क्रिप्शन लिनु पर्छ भने, यो समन्वय गर्न अलि गाह्रो हुन सक्छ। तपाईं कसरी यो निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको बच्चाले ठीक समयमा सही डोज पाउँदछ यदि तपाईं यो दिन त्यहाँ हुनुहुन्न भने?
भाग्यवस, प्रायः विद्यालयहरूको प्रोटोकल हुन्छ यो स्थितिलाई सम्हाल्नको लागि। Elaine टेलर-क्लाउस, cofounder प्रभाव र को संस्थापक सेनिटी स्कूल , सिफारिस गर्दछ कि आमा बुबाले धेरै प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, सुरू गरेर, स्कूलमा औषधी कसले दिने?
टेलर-क्लाउस भन्छन कि आमा वा बुबाले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि औषधीको प्रबन्ध वयस्कबाट गरिन्छ जुन जिम्मेवारी स्वीकार्न राजी भएको छ, र अनियमित रूपमा तोकिने कुरा होईन, टेलर-क्लाउस भन्छन्। यदि स्कूलमा नर्स छ भने, यो औषधी प्रबन्ध गर्न प्रायः व्यक्तिको उत्तरदायित्व हो। यदि होईन भने अभिभावकले यो कसरी सम्हाल्छ भनेर सोध्नुपर्दछ।
उनी पनि सल्लाह दिन्छिन् कि अभिभावकले पत्ता लगाउने व्यक्ति दिनको लागि बाहिर छ र डोज कसरी वितरण गर्ने भनेर ब्याक-अप वितरक को हो भनेर पत्ता लगाउनुहोस्। सम्भवतः, स्कूल लेबलमा स्पष्ट खुराक निर्देशनहरूको साथ प्रिस्क्रिप्शन बोतलको लागि सोध्नेछ।
अन्तमा, यो निश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ एक प्रणाली छ तपाइँको बच्चालाई औषधि लिन सम्झन मद्दत गर्न। एक आदर्श अवस्था एक शिक्षक, नर्स, वा अर्को जिम्मेवार वयस्क हुन सक्छ जब बच्चालाई यो औषधी लिने समय आउँदछ।
एक लामो समय पछि एक xanax पिउन सक्छु
Vacc. भर्खरै खोपहरू लिनुहोस्।
सबै राज्यहरू बच्चाहरूलाई खोपहरू लिन आवश्यक छ स्कूलमा उपस्थित हुनको लागि जबसम्म उनीहरूसँग योग्यता प्राप्त चिकित्सा छुट हुँदैन। (केही राज्यहरूले पनि धार्मिक र दार्शनिक छुटहरू अनुमति दिन्छन्।) यी कानूनहरू प्राय: दुवै सार्वजनिक र निजी विद्यालयहरूमा लागू हुन्छन्।
यी खोपहरू बच्चाहरूलाई रोक्न सक्ने रोगहरूबाट बचाउँन मद्दत गर्दछ, र यसले अरूलाई पनि यस रोगलाई फैलाउनबाट मद्दत गर्दछ। र यो महामारीको बेलामा डाक्टरको भ्रमण छोड्ने सल्लाह दिईएको जस्तो लाग्न सक्छ, यो छैन। अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्स कडा उत्साहजनक छ बालबालिकाहरूले नियमित हेरफेर र खोपहरू लगायतका स्वास्थ्य उपचारहरू जारी राख्दछन्।
तपाईंको बच्चा उसको सबै खोपमा अप-टु-डेट छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउन तपाईंको बाल रोग विशेषज्ञको साथ जाँच गर्नुहोस्। शटहरू प्राय: राज्य र स्थानीय स्वास्थ्य विभागका साथै फार्मेसीहरू मार्फत उपलब्ध हुन्छन्। क्लिक गर्नुहोस् यहाँ तपाईंको नजिक क्लिनिक पत्ता लगाउन।
सम्बन्धित: खोप तथ्या .्क
Your. तपाईको आपतकालिन सम्पर्कहरू साझेदारी गर्नुहोस्।
हामी सबै आशा गर्छौं कि हाम्रा बच्चाहरूले स्कूलमा मेडिकल इमरजेन्सीको अनुभव कहिले गर्दैनन्। यदि तिनीहरूले त्यसो गरे भने, हामी पक्कै पनि सकेसम्म चाँडो त्यहाँ जान चाहन्छौं। यदि स्कूल आपतकालिन स्थितिमा तपाईंसँग सम्पर्कमा पर्न सक्दैन भने, तिनीहरूले कसलाई सम्पर्क गर्ने भनेर जान्नु आवश्यक छ।
तपाईंले एक विश्वसनीय मित्र, छिमेकी, वा परिवारको सदस्यलाई सोध्नु पर्छ यदि उनीहरू तपाईंको बच्चाको आपतकालीन सम्पर्क हुन इच्छुक छन् भने। यो व्यक्ति तपाईंको नजिकै बस्नुपर्दछ - र राम्रोसँग तपाईंको क्वारेन्टाइन पोडमा कोही हुनुहोस्! — र स्कूलको दिनमा फोनको उत्तर दिनुहोला।
तर त्यस पनी, स्कूलले तपाइँको प्रदायक र बीमा सम्बन्धी सबै जान्न पनि आवश्यक छ। हो, ती सबै फारामहरू भर्नु दर्द हो, तर यसको लागि त्यहाँ राम्रो कारण छ।
एक वयस्क को लागी कति मिलीग्राम मेलाटोनिन
यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि स्कूलले तपाईंको बच्चाको [अभिभावक] को रूपमा काम गर्दछ जब तपाईं र तपाईंको आपतकालीन सम्पर्कहरू पुग्न सक्दैन, यारेस भन्छिन्। तपाईं तिनीहरूसँग प्यारामेडिकहरू र आपतकालीन घटनामा आपतकालीन कोठामा साझा गर्नको लागि सही जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। यसले एक संक्षिप्त चिकित्सा ईतिहास, बीमा जानकारी, र प्रदायक जानकारी समावेश गर्नुपर्दछ। यी सबैले आपतकालिन हेरचाहको सुविधा प्रदान गर्दछ।
Aller. एलर्जीको लागि तयार गर्नुहोस्।
यदि तपाईंको बच्चालाई गम्भीर एलर्जी छ भने, आफ्नो एलर्जी विशेषज्ञलाई सोध्नुहोस् कि तपाईंले के सावधानी अपनाउनु पर्छ, र त्यसपछि स्कूलमा जाँच गर्नुहोस् उनीहरूको पत्ता लगाउनको लागि। एलर्जी प्रोटोकल ।
टेलर-क्लाउस भन्छन् कि यो सुनिश्चित गर्न उत्तम हुन्छ कि कक्षाकोठाको शिक्षक वा विद्यार्थीको EpiPen (यदि आवश्यक छ), छ कि यो समयावधि सकिएको छैन, र कसैलाई यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छ भनेर टेलर-क्लास भन्छन्। यदि विद्यार्थी धेरै कक्षा कोठामा जान्छ भने, यो इपिपेन राख्नका लागि शिक्षकहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो हुन्छ र शिक्षकहरूलाई सबै जानकारी गराउन। थप रूपमा, यसले स्कूल नर्सलाई आपतकालका लागि प्रिस्क्रिप्शन एन्टीहिस्टामाइन उपलब्ध गराउन सक्छ।
यदि तपाइँको बच्चासँग मोल्ड, रसायन, वा अरू केहि वातावरणीय एलर्जी छ भने, तपाइँ तपाइँको स्कूल प्रशासन संग कक्षा कोठा छनौट वा सफा गर्न प्रयोग गरिने रसायन जस्ता मुद्दाहरूको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूसँग हुन सक्छ वा हुन नदिन तपाईंको आवश्यकताहरू समायोजन गर्न सक्दछ, तर राम्रो संचारले मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंको स्कूल वातावरणले तपाईंको बच्चाको एलर्जीको लागि वातावरणीय ट्रिगरहरू समावेश गर्दछ भने, तपाईं तिनीहरूलाई हटाउन मद्दत गर्न स्वयम्सेवा पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
सम्बन्धित: बच्चाहरूको लागि एलर्जी परीक्षण
यदि तपाइँको बच्चाको स्वास्थ्य चिन्ता छ भने, तपाइँले स्कूल वर्षको लागि तयारी गर्न थोरै अतिरिक्त काम गर्नु पर्ने हुन्छ। राम्रो सञ्चार र पूर्वानुमान एक प्रभावी स्कूल चिकित्सा योजना को कुञ्जी हो। चाहे तपाईंको बच्चाले प्रिस्क्रिप्सन औषधी लिन्छ, गम्भीर एलर्जी हुन्छ, वा केही अन्य स्वास्थ्य चिन्ता, आमा बुबाले स्कूलसँग समन्वय गर्न सक्दछ यसलाई सुनिश्चित गर्न मद्दतको लागि स्वस्थ स्कूल वर्ष।
के एक पुरुष एक खमीर संक्रमण को लागी लिन सक्छ?
मेटफर्मिन गोली कस्तो देखिन्छ?
cetirizine र levocetirizine बीच के फरक छ?
संयुक्त राज्य मा सबैभन्दा सामान्य पोषण को कमी के हो
इन विट्रो निषेचन को औसत लागत के हो?
के म tylenol लिन सक्छु र रक्सी पिउन सक्छु?